Qaanuun khaaska ah
IKE SMART CITY, LLC (“annaga”, “annaga”, “keenna”) waxay ixtiraamaan asturnaantaada oo ay ka go’an tahay inay ilaaliso iyada oo u hoggaansamaysa sida aan u hoggaansameyno qaanuunkan.
Nidaamkani wuxuu qeexayaa noocyada macluumaadka aan kaa soo aruurin karno ama inaad bixiso markaad booqanayso dukaanka IKE (ah “IKE”) iyo habdhaqankeena loo ururinayo, isticmaalka, dayactirka, ilaalinta, iyo bixinta macluumaadkaas.
Fadlan u akhri qaanuunkan si taxaddar leh si aad u fahamto qaanuunkeena iyo dhaqamada ku saabsan macluumaadkaaga iyo sida aan yeeli lahayn. Haddii aadan ku raacsaneyn qaanuunkeena iyo ficilladayada, xulashadaada waxaa waaye inaad isticmaalin IKEska. Adiga oo helaya ama isticmaalaya IKE, waxaad ku raacsan tahay qaanuunka sirta ah. Qaanuunkani way isbeddeli kartaa marba mar. Isticmaalka IKE ee sii socota ka dib markaan sameyno isbedel ayaa loo arkaa in ay tahay isbedel aqbalin, markaa fadlan si joogta ah u hubi qaanuun cusbooneysinta.
MACLUUMAADKA ISTICMAALAHA EY ARUURISAY IKE.
Qaar badan oo ka mid ah sifooyinka, adeegyada iyo macluumaadka laga heli karo IKE waxaa si qarsooni ku heli karaa adiga adigoon u baahnayn inaad bixiso macluumaad ku saabsan naftaada. IKE waxay ururinaysaa macluumaad ku saabsan wada-shaqeeynta qarsooni ah oo isticmalaha kasta iyo IKE, sida sifooyinka, adeegga iyo macluumaadka inta badan la isticmaalo iyo sida loo isticmaalo, markaa waxaanu hagaajin karnaa heerka IKE iyo waayo-aragnimadaada IKEs. Waxaa laga yaabaa in aan la wadaagno macluumaadka isticmalaha qarsooniga ah iyada oo aan la xaddidneyn magaalada halkaas oo IKE ku yaal, lammaaneyaasha degaanka iyo lamaanayaasha tiknoolajiyada ama cid kasta oo si macquul aan u aragno.
Qaar ka mid ah sifooyinka ay bixiso IKE waa mid isdhexgalka, iyo haddii aad la xiriirto sifooyinkaas isdhexgalka, IKE ayaa ku weydiin doona inaad bixiso macluumaad ku saabsan naftaada, qaar ka mid ah kuwaas oo shakhsi ahaan kuu aqoonsan kara. IKE waxay ku weydiin doonaan oo keliya macluumaadka lagama maarmaanka u ah inay qabtaan adeegga aad codsato adigoo ku dhex jira qaabka isdhexgalka ee aad doorato. Intaa waxaa dheer, IKE waxay kaliya ku kaydin doontaa macluumaadkaan muddo dheer ku filan si ay u qabato adeegga aad codsatay, iyo inta lagu jiro wakhtigaas, ma wadaagi doonno, iibinayno ama u siideyno macluumaadkaan dhinacyada saddexaad, iyada oo ku xiran wax kasta oo ka shaqeynaya Wada-hawlgalaha Saddexaad , sida ku qeexan cutubka soo socda. Taas ka dib, macluumaadka ma sii hayni doono IKE ama annaga.
Qaar ka mid ah sifooyinka isdhexgalka ee madalka IKE-da waxaa loola shaqeeyaa dhinacyada saddexaad, iyo in ay doortaan in ay ku hawlan yihiin sifooyinkaas, waxaad ku heshiinay inaanu siini karno IKE macluumaadka aad bixisay, oo ay ku jiraan wixii macluumaad ah ee ku aqoonsan karo shakhsi ahaan, ee dhinaca saddexaad oo wada-howlgalka sifooyinkas (“wada-howlgalaha Saddexaad”). Tusaale ahaan, haddii IKE leeyahay 311 sifooyin ah oo kuu suuragelinaya inaad farriin u dirto magaalada iyo aad hesho warar ku saabsan xaaladdaada fariinta, tani maaha kaliya in lagu weydiisto cinwaanka emailkaaga laakiin sidoo kale waxay siin doontaa magaalada cinwaanka emailkaaga, howl-galaha Saddexaad ee Qaybta 311, si aad u hesho jawaabaha aad codsatay. Had iyo jeer waanu sheegi karnaa in qaabka isdhexgalka ee ay u shaqeyneyso Shirkadda howl-galaha saddexaad, shaacintani waxay si cad ugu muuqan doontaa shaashadda markaad doorato mid ka mid ah sifooyinkaas. Iyada oo la tixgelinayo wax kasta oo ay ku shaqeyneyso Wada-Shaqeeye Saddexaad, IKE waxay kaliya ku kaydin doontaa macluumaadka aad bixiso wakhti dheer oo ku filan si ey u qabato adeegga aad codsatay. Taas ka dib, IKE ama annaga ma sii hayn doono macluumadka, laakiin waxaa laga yaabaa wada-shaqeeye saddexaadka in uu sii hayo. Waxaanu kaliya macluumaadkaas la wadaagi doonna wada-shaqeeye saddexaad, annagana ma wadaagi doonno, iibinayno ama u siino macluumaadkaan cid kale oo saddexaad. Ma xakameyno xakamaynta lamaanaheena eh howl-galaha seddaxaad, waxaadna ku xirnaan doontaa qaanuunkooda iyo shuruudaha iyo xaaladaha marka aad la shaqeyneyso wax kasta oo ay ku shaqeyneyso howl-galaha Saddexaad. Sababtan awgeed, waxaan kugula talineynaa in aad dib u eegto siyaasadahooda iyo shuruudaha iyo shuruudaha ka hor inta aan la qabsanin wax kasta oo ay ku shaqeyneyso howl-galaha Saddexaad. Tusaale ahaan, qaabka Wayfinding ee IKE Kiosks waxay isticmaalaan API Khariidadaha Google, waxaadna ku xidhantahay Nidaamka Qarsooniga ee Google ee aad adeegsanayso habka Wayfinding.
IKE kasta waxaa laga yaabaa in lagu qalabeeyo siinta adeegga wifi ee aaladaha shakhsi ahaaneed ee awood u leh inuu helo signal oo ku yaal meel u dhaw IKE. Waxaan la shaqeyneynaa howl-galaha Saddexaad si loo soo qaato macluumaad farsamo oo gaar ah si aanu nooga caawino inaanu u shaqeyno oo aan u siino adeegga wifi iyo adeegyada kale ee laga heli karo IKE. Dhammaan macluumaadka farsamada ah ee aan ururinno waa la qarsoomiya, macluumaadka farsamadani waxa ka mid ah nooca qalabka, macluumaadka dadweynaha, goobta qalabka guud, socodka lugaha iyo booqashada IKE Kiosk, iyo macluumaadka la isku daray oo muujinaya raadinta boggaga caanka ah, inkastoo fadlan ogow inaanu ku kaydi taariikhda booqashadaada ama raadi bogagga internetka ee aad booqatid markaad isticmaasho qalabkaaga gaarka ah si aad u hesho adeega wifi. Macluumaadka farsamada waxaa heli kara oo kaliya annaga iyo howl-galaha saddexaad, waxaanan sii haysanaa lix (6) bilood oo kaliya, kadibna waxaa naga tirtira annaga iyo howl-galaha saddexaad kadibna la heli karin.
Fadlan ogow in dhammaan macluumaadka farsamada ee la uruuriyey la isku darayo oo la qarsoominayo, taasoo macnaheedu yahay in macluumaadka farsamada la isku daray oo na la qarsoomiyay loo isticmaali karin si loo aqoonsado isticmaalaha gaarka ah ee IKE ama adeegyada IKE wifi. Waxaannu xaq u leenahay inaan helno cinwaanno MAC ah oo la shaqsiyeyay si loo aqoonsado loona mamnuuco dadka isticmaala ee la shaqeeya IKE ama adeegyada wifi oo IKEga ee ku xadgudubka Nidaamkeenna Isticmaalka iyo Shuruudaha Isticmaalka.
IKE kasta wuxuu yeelan karaa dareemayaasha deegaanka oo ururiya xogta ku dhow deegaanka IKE, sida tayada hawada. Dareemayaasha deegaanka ma soo aruurinayaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan. Waanu wadaageynaa xogtan iyada oo aan la xaddidnayn magaalada, lamaanayaasheena maxaliga ah iyo wada-hawlgalayaasha teknoolajiyada ama cid kale oo aan si macquul ah u aragno.
Qaar ka mid ah IKEs waxaa lagu qalabeeyaa hal ama dhowr kamaradood. Kaamiradu waxay qabataa sawirada aagga ku wareegsan IKE, sawiradana waxaa ku jiri kara adiga. Ma xafideyno wax sawir ah kamarada qabatay muddo ka badan 30 maalmood, haddii aan sawirku muhiim yahay si loo baadho dhacdo dhacday ma ahayne. Intaa waxaa dheer, ma isticmaali doonno ama u bixinayno macluumaadka ay soo ururiyeen kamaradaheena marka laga reebo hagaajinta howlaha iyo hubinta amniga IKE, hadday lagama maarmaan noqoto si wax looga qabto hawlaha sharci darrada ah, la xirriirta ama lagu sameeyo IKEs, ama haddii aan rumaysanno in shaacinta sharciga ubaahanyahay ama ey tahay danta amniga dadweynaha. Ma isticmaali doonno tiknoolajiyada aqoonsiga wajiga, mana isticmaali doonno kamaradaheena si aan ula socono dhaqdhaqaaqaaga magaalada oo dhan.
Marka lagu daro shaac-bixinnada aan ku ogaanay meelo kale oo ka mid ah qaanuunkan, waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale soo bandhigno wax kasta iyo dhammaan macluumaadka nagu soo ururiyey ama in aad naga siiso IKE sida lagu sharxay siyaasaddan waalidiinta, asxaabteena iyo asxaabteena, iyo / ama shaqaale, kaas oo macnaheedu yahay, qaar ama dhammaan hantida ama danaha lahaanshaha ee IKE Smart City, LLC.
Waxaan fulinay tallaabooyin loogu talagalay in lagu hubiyo macluumaad kasta oo aad na siisid iyada oo loo marayo IKE khasaare shil ah iyo ka soo galitaanka aan la oggolayn, isticmaalka, isbeddelka iyo shaacinta. Inkasta oo aanu samayno intii ugu fiicneyd si aan u ilaalino macluumaadkaaga, ma xaqiijin karno ammaanka macluumaadka aad naga siiso IKE.
IKEs looma diro carruurta da’doodu ka hooseyso 13 sano mana ogaanno ama si ula kac ah u soo aruurineyno macluumaadka shakhsiyeed ee carruurta da’doodu ka hooseyso 13 sano. Haddii aad ka yartahay seddax iyo tobban sano, laguma ogola inaad soo gudbiso macluumaadka shakhsi ahaaneed ee lagu aqoonsan karo Waxaan u hoggaansamaynaa Sharciga ilaalinta asturnaanta caruurta ee internetka ee ku jira hawlgalkayaga IKEs.
ISBADALKA QAANUUN KHAAS AH
250 N Hartford Ave Columbus, Ohio 43222
English Español 中文 عرب Somali Portugues Française Italiana 日本人 한국어